Aya ndiwo mabudiro akaita Apple kubvisa kurongedza kwepurasitiki kweiyo iPhone 13 | IPhone nhau
Aya ndiwo mabudiro akaita Apple kubvisa kurongedza kwepurasitiki kweiyo iPhone 13
Ngirozi Gonzalez | 17/09/2021 18:11 | iPhone 13, Noticias
Kubva 2018 Apple yakange iri kambani isina kwayakarerekera kambani padanho repasi rese rekushanda. Nekudaro, chinangwa ndechekuti kunyangwe kugadzirwa kwezvigadzirwa zvacho kuchave kabhoni isina kwayakarerekera isati yasvika 2030. Ndosaka basa rakakura richiitwawo mukuyedza kuona kuti zvigadzirwa zvine zvazvinogona kukanganisa nharaunda nekusimudzira kuvandudzwa uye kugadziriswazve zvishandiso. Mu chirevo chekupedzisira vakazivisa izvozvo iyo iPhone 13 uye iPhone 13 Pro yaisazove nepurasitiki yekurongedza iyo yaizochengetedza mazana matanhatu epurasitiki. Nekudaro, kusahadzika nezvekuti iko kurongedza kutsva kwaizovei uye nemabatiro atingave nechokwadi chekuti haina kuvhurwa kwatogadziriswa kare. Uku ndiko kurongedza kutsva kweiyo iPhone 13.
Ichi chinamirwa chinokutendera iwe kubvisa epurasitiki kurongedza kubva kune iyo iPhone 13
Zvitoro zvedu, mahofisi nedata uye mashandiro enzvimbo atove asina kabhoni. Uye muna 2030, ndizvo zvichaita zvigadzirwa zvedu uye kabhoni tsoka yako kana uchizvishandisa. Gore rino isu takabvisa kuputira kwepurasitiki kubva ku iPhone 13 uye iPhone 13 Pro kesi, tichichengetedza mazana matanhatu epurasitiki. Uyezve, gungano redu rekupedzisira haritumire chero chinhu kune marara.
Kiyi yekuziviswa kwaTim Cook nechikwata chake mune yakakosha munaGunyana 14 yaive zvakare munhau dzakanangana nharaunda. Isu tinofanirwa kufunga nezve Apple chinangwa icho icho na2030 zvese zviri zviviri mashandiro epasirese uye kugadzirwa kwechigadzirwa hazvina kabhoni. Kuti uite izvi, mari yakawanda inofanirwa kuiswa mari mukufambisa kudzokorodza zvigadzirwa uye kushandisa zvinowedzerwazve zvigadzirwa mumidziyo mitsva.
Uku ndiko kufananidza pakati pemabhatiri eiyo yakazara renji ye iPhone 13
Muchiitiko cheiyo iPhone 13, iyo kubviswa kwepurasitiki yekuvhara iyo inovhara iro bhokisi. Kuiswa uku kwaive nechinangwa chakapetwa kaviri. Kutanga, chengetedza bhokisi. Uye chechipiri, kuve nechokwadi chekuti chigadzirwa hachina kuvhurwa usati wasvika pamaoko emushandisi. Uye iwe ungakwanise sei kugadzira kavha iyo yaizoramba ichichengetedza iyi poindi yekupedzisira usingashandise plastiki yakawanda?
iPhone 13 bhokisi pic.twitter.com/NJfP37hFFP
Mhinduro yacho inowanikwa mune chifananidzo chakaonekwa pa Twitter paunogona kuona kuiswa kweiyo iPhone 13. Kuona kuti chigadzirwa hachina kuvhurwa anonamatira kumusoro-kusvika-pasi akagadzirwa pazasi pebhokisi, Kupfuura nepakati pemibvunzo mipfupi miviri yekuvhura. Nenzira iyi, bhokisi rinoramba rakavharwa neanamatira iyo inogona kubviswa kuburikidza nesiraidhi yakapusa nekubata iyo tebhu yakamisikidzwa nemuseve muchena pane yakasvibira kumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Aya ndiwo mabudiro akaita Apple kubvisa kurongedza kwepurasitiki kweiyo iPhone 13
Apple inovhara iOS 15's iCloud Yakavanzika Relay chimiro muRussia
Iwe unogona ikozvino kuchengetera iyo iPhone 13